2008-01-04 @ 10:48 in Politika
Araka ny efa fantatry ny mpanara-baovao dia androany maraina naroso tamin'ny 9 ora ny fifampiarahaban'ny mpitondra fanjakana amin'ny solombavambahoaka sy ny ny Ben'ny tanàna. Mazava loatra fa tany amin'ny lapam-panjakana Iavoloha no nanaovana izany fifampiarahabana izany. Dia lazaina mialoha eto fa teo amin'ny fitoerana voalohany no napetraka ny Ben'ny tanànan'Antananarivo mivady na dia tsy sisiny loatra aza izany.
Manaraka izany noho ny asa dia tsy naharaka tsara aho na dia te-hampita antsipiriany ny zavanisy tao aza. Misy ihany koa anefa ny tsikaritra tanatin'ny asa. Ny kabary re voalohany dia ny an'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Atoa Jacques Sylla. Fifampiarahabana moa ka tsy maintsy firariantsoa no manjaka. Mazava loatra fa tiany hanandanja ny firariana "hiaina amin'ny fandriampahalemana" sy "hiasa anaty filaminana" ny vahoaka. Mitohy avy eo moa ny fampandresen-dahatra fa anaty fanatontoloana isika ka mifampiankina anaty sehatra iraisam-pirenena avokoa ny zava-misy rehetra, toy ny fiakaran'ny vidin'ny solika, ny fitsarana ady heloka bevava ary ny tany mihamafana.
Ny Praiminisitra avy eo no nikabary ka nilaza tsotsotra ny vitan'ny governemanta. Tao moa no nahenoana hoe nihena 38% ny tahan'ny heloka bevava raha oharina tamin'ny taona 2006. Teo koa ny filazana fa tafaverina amin'ny tompony ny 75%n'ny omby nangalarina. Teo koa no nilazana fa hakarina ho 60 000Ar ny fanampiana ho an'ny mpampianatra FRAM na mpampianatra iantohan'ny ray aman-drenin'ny mpianatra ka mba manao fanampiana ihany koa ny fanjakana foibe.
Nanaraka ny kabary na anatin'ny kabary moa no nanateran'ny olombaventy sy solontenam-paritra isankarazany ny solombodiakoho. Anisan'ny nanolotra izany tamin'ny filoham-pirenena mivady ny Ben'ny tanànan'Antananarivo sy ny solontenan'ny isam-paritra. Narahina fanomezana santa-bary avy amin'ny isam-paritra 22 izany satria "ny akoho laoka ampiarahana amin'ny vary" hoy ny kabarin'ny filoham-pirenena. Miteny faritra ihany dia tsara ny milaza hoe nihofahofa teny amin'ny sehatra avokoa ny fanevan'ny faritra 21 (sarin'ny armoirie) fa ny an'ny Haute Mahatsiatra no "tsy misy saina" tsy nahatonga ny azy, drapeau no tiako lazaina hoy ny filoha izay. Ny tsikaritra hafa ihany koa dia ny nampitodihana tamin'ny mpanatrika ny osy iray rehefa hikabary ny filoham-pirenena. Kely ny hanin'ireny dia efa mahavokatra ronon be, hoy ny filoha nandritra ny kabariny.
Nandritra ny kabariny tokoa ny filoha dia nilaza fa be ny asa vita saingy be ihany koa asa miandry. Ny 75%n'ny malagasy manko no mbola mahantra. Nolazain'ny filoha amin'ny zay ny laharam-pahamehana telo hotanterahin'ny governemanta mandritra ny taona 2008. telo aloha hoy izy fa tsy valo.
1- Hampitombo ny harin-karena (fampandraisana anjara ny mpandraharaha sy ny mpanao asa tanana malagasy) satria tsy hisy fandrosaona izany raha tsy mitombo io harinkarena io.
2- Fanamafisana ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra.
3- Fampihenana ny fahantrana
Ny tanjona kendrena manko araka ny filoha dia ny hahatrarana ny harinkarena ho 7 na 8% any ho any. Avy eo moa dia nampitenenin'ny filoha hamelabelatra ny zavamisy ankehitriny ny minisitra Ivohasina Razafimahefa. Lavalava ihany io kabary fanavazavana io fa miaraka amin'ny tabilao sy voarakitra an-tsoratra moa ka tsy nahamonamonaina loatra. Ny nomarihana sady efa fantatsika ihany dia 580 000 000€ no azo tamin'ny firaisambe Eoropeana ary 700 000 000$ kosa indray no azo avy tamin'ny banky iraisam-pirenena hanatanterahana ny MAP. Ny faharoa dia raha 475 000Ar n harinkarena isam-batan'olona tamin'ny 2006 dia tafakatra ho 628 260Ar kosa izany tamin'ny taona 2007. Ny tahan'ny fahantrana kosa raha 80.0% tamin'ny 2002 dia nihena ho 67.5% kosa izany tamin'ny 2006, mbola eo ampikajiana fa mbola mihena io hoy izy.
Ary ny nomarhinia farany dia hisy fifaninanana ho an'ny Kaominina rehetra ka ny valin'ny fifaninanana dia holazaina amin'ny 10 novambra 2008 any amin'ny lapam-panjakana eny Iavoloha ihany. Asa mety mbola hisy hosoratana ve?